4 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay Jamhuuriyadda Czech iyo Faransiiska
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » 4 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay Jamhuuriyadda Czech iyo Faransiiska
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Czechia Breaking News • Wararka Faransiiska • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Horaantii isla maalintaas, diyaarad matoor fudud ayaa ku dhacday waddada weyn ee waqooyiga Faransiiska ee Voignarou, halkaas oo ay ku dhinteen laba qof oo saarnaa.
Diyaarad matoor fudud leh ayaa maanta ku burburtay Jamhuuriyadda Czech.
Laba qof oo saarnaa diyaaradda ayaa ku dhintay shil.
Laba qof ayaa sidoo kale ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Faransiiska
Laba qof ayaa ku dhimatay shilkii diyaarad isboorti oo matoor fudud ku lahayd meel u dhow magaalada Kladno oo u dhow Prague Czech Republic.
Shilka ayaa la sheegay Sabtidii, September 4, oo uu wakiil ka ahaa booliska Czech Lucia Novotna.
"Laba qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay diyaarad isboorti meel u dhow magaalada Kladno," ayuu yiri sarkaal booliis ah.
Shilka ayaa dhacay wax yar uun ka dib 14:00 (2pm) Waqtiga Bartamaha Yurub.
Booliska Czech ayaa hadda baaraya sababaha keenay dhacdadan.
Horaantii isla maalintaas, diyaarad matoor fudud ayaa ku dhacday waddada weyn ee waqooyiga degmada Voignarou. Laba qof ayaa sidoo kale ku dhintay shilkaas.